Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwaynaha Somaliya oo Furay Kalfadhigii 7aad ee Baarlamaanka.
Madaxwaynaha Somaliya oo Furay Kalfadhigii 7aad ee Baarlamaanka.
Posted by ONA Admin	/ October 26, 2015
Madaxweynaha Somaaliya ayaa furay kal-fadhiga 7aad ee baarlamaanka federaalka ooy soo xaadireen inka badan 140 xildhibaan. Kulanka oo uu shir guddoominayey afhayeenka baarlamaanka Dr. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa ku furmay jawi caadi ah, iyadoo gudomiyuhu uu u sheegay xildhibannada ineey sugayaan howlo badan, gaar ahaan ka doodista hindise sharciyeedyo ay baarlamaanka u soo gudbiyaan golaha wasiirrada.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad dheer ka jeediyay furitaanka fadhiga ayaa sheegay in golaha baarlamaanka ay wax badan qabteen, haatanna laga sugayo ineey howlaha dhismaha dowladnimo iyo adkeynta shuruucda dalka ay qeybtooda ka qaataan.
Waxaa uu sheegay in baarlamaanka laga sugayo in ay de-dejiyaan ooy meelmariyaan sharciyo dhowr ah oo hadda horyaalla oo uu kujiro sharciga la dagaallanka argagixisada, oo uu xusay inuu muhiim u yahay amniga dalka.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha siyaasadda dalka iyo sida ay tahay in xildhibaannada ay kaalintooda u muuqato barnaamijka hiigsiga 2016, isagoo dhanka kale tilmaamay in beesha caalamka ay Somaliya lagarab taagan tahay in laga caawiyo ineey ka baxdo marxaladda ay ku jirto.
Ammaanka xarunta baarlamaanka iyo jidadka soo gala ayaa la adkeeyey, iyadoo ciidamo badan la dhigay si ay u sugaan amniga.